नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : बाल्टिमोर अमेरिकाको सबैभन्दा असुरक्षित र खतरापूर्ण शहर !
बाल्टिमोर अमेरिकाको सबैभन्दा असुरक्षित र खतरापूर्ण शहर !
अमेरिकामा सबैभन्दा बढी हत्या, लुटपाट, अशान्ति हुने मुख्य तीन शहरहरु मध्ये बाल्टिमोर यो बर्ष एक नम्बरमा आएको छ । अशोशिएट प्रेस ( एपी ) का अनुसार यस अघि सिकागो एक नम्बरमा रहेकोमा यस पटक बाल्टिमोरले उछिनेको छ । यो सँगै बाल्टिमोर अमेरिकाको सबै भन्दा असुरक्षित र खतरापूर्ण शहरमा परिणत भएको छ । हरेक दिन जसो यहाँ मान्छे लुटिने, हत्या हुने गरेको छ । त्यसैले गर्दा बाल्टिमोर शहर भित्र सम्बेदनशिल मानिएका ठाउँँहरुमा घर जग्गा अत्यन्त सस्तो हुने गरेको छ । बाल्टिमोर शहर भित्र यस्ता पनि कयौँ ठाउँँ हरु छन जहाँ मान्छे असुरक्षाको हिसाबले बस्न नसकेर घर छोडेर हिंड्ने गर्दछन । भुटानी र नेपालीहरुको पनि बाक्लो बसाइ रहेको बाल्टिमोर शहरमा कयौँ भुटानी र नेपालीहरु लुटिएका, कुटिएका, मारिएका घटनाहरु पनि छन । अशोशिएट प्रेस ( एपी ) का दुई समाचार तल पढ्नुस : Baltimore breaks city record for killings per capita in 2019